Utshwala besiZulu – iAfrika
Utshwala besiZulu buwusiko kumuntu ongumZulu, umuntu akabenzi ngoba ephuza noma ngoba ezonquma inkukhu noma imbuzi noma inkomo. Kubalulekile nje ukuthi umuntu ahlale ahlale abenze utshwala besiZulu noma ngabe engazochitha gazi, abenze nje utshwala ebenzela ukuthi buphuzwe ekhaya kungazelele muntu, mhlawumbe kumenywe omakhelwane abambalwa kuphuzwe ngaphandle kokuba kuze kushiswe impepho.
Phakathi nezimpahla ezithintene nokudla kwesiZulu kanye nokwenziwa kotshwala besiZulu kuyaye kube khona ukhamba olwakhiwe ngobumba, ugqoko lomuthi, isigovuzo, isikhetho, imbenge, ukhezo, ithunga, igula kanye nombese wokuhlaba. Zonke lezi zinto zihlala endlini enkulu ekhaya, okuyindlu engasenhla okungeyokhokho.
Noma-ke lezizinto nempahla kungokokhokho kodwa umuntu unalo ilungelo lokukusebenzisa uma ethanda, kodwa ekusebenzisela khona endlini enkulu yokhokho. Umuntu ongafanele ukusebenzisa izinto nempahla yokhokho kuba yindodakazi uma isezinsukwini zayo noma isafelwe. Ziningi izinto amantombazane okufanele afunde ukuzizila uma efelwe, noma ethombile, noma ebelethile.
Tags Izimpahla, Ugqoko, Utshwala